Nivahina nivantana tao amin’ny fahitalavi-pirenena TVM ny filoha Andry Rajoelina androany alatsinainy tamin’ny 8ora hariva, nanome vaovao mikasika ny fivoaran’ny fihanaky ny coronavirus eto Madagasikara sy nampahafantatra ireo fepetra raisin’ny fitondram-panjakana hifehezana ity valanaretina ity.
Nambarany fa nisy tranga 5 vaovao androany rehefa nivaly ny fitiliana natao. Hatreto izany izao dia miisa 17 ny olona mitondra ity otrikaretina Coronavirus ity eto Madagasikara, ary olona iray fiaramanidina avokoa ireo voa ireo, ary nifanakaiky toerana. Nanipika mazava ny filoha fa « tsy misy marary namoy ny ainy ». Izay no mametraka an’i Madagasikara eo amin’ny « Stade 1 » amin’ny fiatrehana ity coronavirus ity, ary anisany antony nanomezana fahalalahana ny orinasa tsy miankina handaminan’izy ireo ny asany, araka ny fanazavany.
Namoaka NAOTY ny ministeran’ny Fitsarana mirakitra ireo fepetra ho raisina eny amin’ireo sampan-draharaha rehetra manerana ny Nosy, ho fisorohana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus.
Anisan’izany ny fiatoan’ny famangiana ny voafonja ataon’ny fianakavian’izy ireo. Mitohy hatrany kosa ny fanaterana ny sakafon’ny voafonja.
lundi, 23 mars 2020 20:51
Coronavirus: Profesora Vololontiana Hanta no afaka manome vaovao ofisialy mikasika io valanaretina io
Nampahafantarina androany fa ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, izay Sojaben’ny fakioltean’ny fitsaboana oniversiten’Antananarivo, irery ihany, ankoatra ny Filohan’ny Repoblika, no mpitondrateny ofisialy afaka manome vaovao amin’ny antontanisa marina mahakasika ny "Coronavirus" eto Madagasikara.
Hisy ny vaovao manokana isan’andro isaky ny amin'ny 1 ora tolakandro ao amin'ny haino amanjerim-panjakana Malagasy hamoahana ny antontanisa ofisialy.
lundi, 23 mars 2020 20:49
lundi, 23 mars 2020 20:35
Coronavirus: Ireo mpandeha tamin'ny zotra MD 051 antsoina hanatona Tobim-pahasalamana
Namaoka lisitr’ireo mpandeha tamin'ny zotra MD 051 avy any Paris (Frantsa) tamin'ny 18 marsa 2020 ny fanjakana, ary miantso azy ireo hiantso maika ny laharana 914 na hanatona na Tobim-pahasalamana na ny Tobin'ny mpitandro filaminana akaiky azy indrindra :
- Istasse Océane Eliane Marie Annie (Analamahitsy Carrière)
- Halier Jean François (Toliara)
- Cardon Luce (67ha)
- Hanitra Raissa Funny (Ankaditoho Marohoho)
- Tila Fabrice (Ankaditoho Marohoho)
- Rasoarimalala Evelyne (Ampamarinana)
- Noguer Jaine (Andaboly Toliara)
- Benjanon Vainchtein (Matsabory Ambatoloaka)
- Dumand Patrica Chantal (Madirakely Nosy Be).
lundi, 23 mars 2020 20:24
Coronavirus: Nijery toerana azo ametrahana ireo fianakaviana tsy manan-kialofana ny Minisiteran'ny mponina
Nijery toerana azo ametrahana ireo fianakaviana tsy manan-kialofana ny Minisiteran'ny mponina, ho fiatrehana ny fianaky ny coronavirus. Ny EPP Nanisana no nojerena niaraka tamin'ny avy eo amin'ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, ny BNGRC...
Ho entina eo anivon'ny Komity misahana ny fandrindrana ny fisoroana (Centre opérationnel de commandement COVID-19 Ivato) ity coronavirus ity ny volavolan-kevitra ahitana ny fomba ahafahana manatanteraka azy.
Nidina ifotony nanentana ireo Ray aman-dreny mba tsy hitondra ny zanany hivoaka ny trano intsony ny Polisim-pirenena. Mbola betsaka ireo minia mitondra azy ireny mandehandeha eny andalam-be raha ny hita tamin’ny toerana samihafa teto Antananarivo androany.
Nampodiana ihany koa ireo tanora mivorivory sy mipetraka eraky ny sisin-dalana ho fisorohana ny fianak'ity valan'aretina ity.
Nampianatra ireo mpividy entana tsy hitangorona fa hanaja ny elanelana 1 metatra ny Polisy sy nanentana ireo mpivarotra ihany ko aizy ireo mba hiaro ny tenany noho izy ireo mifandray amin'ny mpividy isan-karazany.
lundi, 23 mars 2020 19:56
Jirama: Nampitomboina dimy andro ny fe-potoana ahafahan’ny mpanjifa manefa ny faktiorany
Manoloana izao hamehana ara-pahasalamana diavin’ny firenena izao dia nanapa-kevitra ny Jirama fa hifampitsinjovana dia ampitomboina dimy andro ny fe-potoana ahafahan’ny mpanjifa manefa ny faktiorany.